Posted by T2A at 4:36 PM 1 comments Links to this post
တရုတ်ပြည် စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ ၊ အခန်း ၁၂ (နိုင်ငံတော် အကျဉ်းသား)
တရုတ်ပြည် စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ
အစိုးရမူဝါဒအားလုံး၌ အောင်မြင်မှုအပြည့်ရသော မူဝါဒများပင်ဖြစ်စေကာမူ ပေးဆပ်ရသည့်
အရင်းအနှီးများရှိသည် ။ တရုတ်ပြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အားထုတ်မှု၏ ပေးဆပ်ရင်းနှီးရမှုများအနက်
တစ်ခုမှာ (ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အစောပိုင်းကာလများကတည်းကစ၍) အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်သည် ။
မည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားမျှ ဤပြဿနာနှင့် ၎င်း၏အကျိုးဆက်များကို
လျစ်လျှူရှုမထားနိုင်ကြပေ ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည် စီးပွါးရေးစနစ်အဟောင်းမှ အသစ်သို.
ကူးပြောင်းခြင်း၏ ရလာဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တရားသေ အစွန်းရောက်တုံ.ပြန်မှုများ မလိုအပ်ဟု ကျောက်က
စောဒကတက်ထားသည် ။ အဖြေမှာ စီးပွါးရေး ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို
ပို၍လျှင်မြန်စွာ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်သည်ဟု သူကဆိုသည် ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၌ ပေါ်ထွက်လာသည် ။ ဤပြဿနာကို မည်သို.အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြီး မည်သို.ဖြေရှင်းမည်နည်း ဆိုသည့်အချက် ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆန်.ကျင်သူများက စနစ်ဟောင်းအား ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ဤကိစ္စအား အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် အမြတ်ထုတ် အသုံးချမည့် အဖြစ်မျိုး အရောက်မခံပဲ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ၊ သန်.ရှင်းသည့်အစိုးရတစ်ရပ် တည်ထောင်ဖွဲ.စည်းမှု စသည်တို.နှင့်ပက်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နက်ရှိုင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် မည်သို.အသုံးချမည်နည်း ဆိုသည့်အချက်တို.မှာ ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်သည် ။
ရှေ.၌ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နွေဦးပွဲတော် အားလပ်ရက်၌ ဂွမ်ဒေါင်းတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်က အာဏာနှင့်ငွေကြေးဖလှယ်မှုနှင့် ပက်သက်သည့် ရေးသားဖော်ပြချက် အများအပြားကို ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရသည် ။ ၎င်းတို.မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်ဟု မယူဆနိုင်သော်လည်း စီးပွါးရေးအဝန်းအဝိုင်းတွင်း ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်းကိုမူ ကျွန်တော်တို. အသိအမှတ်ပြုရပေမည် ။ ပြဿနာကို ကျွန်တော်တို. လျစ်လျှူရှုမထားနိုင်ပေ ။ “စီးပွါးရေးအရ ကြီးပွါးအောင်မြင်ရမည် ၊ အစိုးရသည် သန်.ရှင်းမြဲ သန်.ရှင်းနေရမည်”ဟု ကျွန်တော်အဆိုပြုခဲ့သည် ။
“သန်.ရှင်းမြဲသန်.ရှင်းရေး”သည် အဓိကကျသည့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ပို၍ပို၍ သဘောပေါက်လာသည် ။ ၎င်းကို လျစ်လျှူရှုထားပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆန်.ကျင်သူများအတွက် အကြောင်းပြစရာတစ်ခု ရရှိသွားစေနိုင်ပြီး ပြည်သူများအား မကျေမချမ်းဖြစ်စေလိမ့်မည် ။ အကျိုးဆက်များမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပေမည် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်တော်တို.သည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆန်.ကျင်ရေးအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို နက်ရှိုင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးချနိုင်ပေမည် ။ ဤပြဿနာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပြဿနာများဖြစ်သည့်အတွက် နည်းလမ်းဟောင်းများကို အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ ပထမဦးစွာ ဤပြဿနာများ၏ အကြောင်းရင်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသည် ။ သို.မှသာလျှင် ၎င်းတို.ကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် ထိရောက်သည့် နည်းလမ်းများကို ကျွန်တော်တို. ရှာဖွေနိုင်ပေလိမ့်မည် ။
ဥပမာအားဖြင့် ဟောင်ကောင်တွင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များအတွင်းက အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများမှာ အလွန်ပင်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည် ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီများသည် စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်အောင် အကျင့်ပျက်နေကြသည် ။ ထို.နောက် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များအတွင်း၌ လွတ်လပ်သော အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ကို စတင်ဖွဲ.စည်းခဲ့သည် ။ “အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆန်.ကျင်ရေးမုန်တိုင်း”ဟူသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပင် ရိုက်ကူးခဲ့သည် ။ ထို.နောက်ပိုင်း၌မူ အခြေအနေများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည် ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည် စီးပွါးရေးယဉ်ကျေးမှု အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဖွံ.ဖြိုးလာသည့်အဆင့်ထိတိုင် ဖြစ်ပေါ်နေတက်သည် ။ သို.သော် နောက်ပိုင်း၌ အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးများ တိုးတက်လာပြီး သူတို.၏ လစာနှင့်အခြားခံစားခွင့်များ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသည် ။ ယနေ.ခေတ် ဟောင်ကောင်သည် ယခင်ကနှင့်မတူ များစွာခြားနားသွားပြီဖြစ်သည် ။ တခြားဖွံ.ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များ၌လည်း အလားတူအခြေအနေများ တည်ရှိခဲ့သည် ။ ဈေးကွက်စီးပွါးရေး၏ အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ အာဏာနှင့်ငွေကြေး ဖလှယ်မှုများ ပါဝင်နေတတ်သည် ။ စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးလာပြီး တရားဥပဒေစနစ်အား ပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်စနစ် ထွန်းကားလာမှုတို.နှင့်အတူ အခြေအနေများ တိုးတက်လာသည် ။ အာဆီယံနိုင်ငံတချို.၌ အလားတူ အတွေ.အကြုံများ ရှိခဲ့ဖူးသည် ။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက ဟောင်ကောင်ရှိ “တကန်ပေါင်”သတင်းစာတွင် “ပြည်မကြီးမှ ခြစားမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ကြိုးစားကြည့်ခြင်း” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်စောင် ပါရှိခဲ့သည် ။ ၎င်းသည် ကျွန်တော်တို.၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာထားခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်က ၎င်းဆောင်းပါးကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ရေး၍ (နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သုတေသနဋ္ဌါန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်) ပေါက်တုန်ထံသို. ထပ်ဆင့်ပေးပို.ခဲ့သည် ။ “ဤဆောင်းပါးသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို လေ့လာထားသည့် ဆောင်းပါးတစ်စောင်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို.အနေဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို စူးစူးစိုက်စိုက် လေ့လာသုတေသနပြုသည့် အဖွဲ.တစ်ခု ဖွဲ.စည်းရန်လိုအပ်ပြီး ကျွန်တော်တို.၏ ဗျူဟာကို အဆိုပြုချပြကာ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ဆောင်းပါးများဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရမည်”ဟု မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့သည် ။
ထိုစဉ်က ဤအကြောင်းအရာကို စနစ်တကျလေ့လာရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်နေခဲ့သည် ။ ၎င်းကို စူးစမ်းလေ့လာပြီးမှသာလျှင် အဖြေတစ်ခုကို အဆိုပြုချပြနိုင်ပေလိမ့်မည် ။ ခေတ်ဟောင်းက နည်းလမ်းဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးချခြင်းသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ဟု ဆိုစေဦးတော့ တင်းကျပ်ပြင်းထန်လွန်းသည့် ဗဟိုဦးစီး စီမံကိန်းစီးပွါးရေးစနစ်ကို ပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်းသည် ကောင်းမွန်မှန်ကန်မည်မဟုတ်ပေ ။ ၎င်းမှာ ဆို.နင့်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်လန်.သဖြင့် နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ မစားသောက်တော့သည့်နှယ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် အစောပိုင်းနှစ်ကာလများအတွင်းက ကျင့်သုံးခဲ့သည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု ၊ လူတန်းစားတိုက်ပွဲ စသည့်နည်းစနစ်များ ဥပမာအားဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို သေဒဏ်စီရင်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးခြင်းသည် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဤကဲ့သို.သော အကျင့်ပျက်မှုများသည် စီးပွါးရေးနှင့် လူမှုရေးစနစ် အပြောင်းအလဲကာလများ၌ ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။ စနစ်ဟောင်းက အားနည်းပြီး ယိုယွင်းနေသည် သို.သော် စနစ်သစ်သည်လည်း ကောင်းမွန်စွာ မတည်ထောင်ရသေးပေ ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် ဤပြဿနာကို အခြေခံကျကျ ဖြေရှင်းရန်အတွက် စီးပွါးရေးနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ပို၍နက်ရှိုင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို. လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည် ။
အာဏာနှင့်ငွေကြေး ဖလှယ်မှုကို ဥပမာအနေဖြင့်ကြည့်ပါ ။ ယခုအခါ စီးပွါးရေးမှာ ပို၍လွတ်လပ်လာသည် ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးကွက်များ ၊ များစွာသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် အဖွဲ.အစည်းများသည် ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည် ။ သို.သော် အာဏာကိုမူ အစိုးရအေဂျင်စီများက တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိုင်ထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် စီးပွါးရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် လွတ်လပ်သည့် ဈေးကွက်အဖြစ်သို. ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည်မပေါ်သေးပေ ။ စီမံကိန်း စီးပွါးရေးစနစ်၏ အကြွင်းအကျန်များမှာ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ အသည်းအသန် ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် ဈေးကွက်အတွင်းမှ တချို.သောယှဉ်ပြိုင်သူများအနေဖြင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ.အစည်းများ၏ မျက်နှာသာပေးမှုကို ရရှိပါက သူတို.အနေဖြင့် တခြားသူများနှင့် မညီမျှသည့် အကျိုးအမြတ် အများအပြား ရရှိပေမည် ။
ဥပမာအားဖြင့် စီမံကိန်းစီးပွါးရေး စနစ်အတွင်းမှ ကုန်စည်များကို ၎င်း၏ပြင်ပသို. ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများကို စီမံကိန်းစီးပွါးရေးစနစ်အတွင်းရှိ ကုန်စည်အရောင်းဆိုင်တို.မှ လျှော့ချထားသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ် ကြီးမားစွာ ရရှိနိုင်သည် ။ နောက်ထပ်တခြား ဥပမာတစ်ခုမှာ တချို.သောကုန်စည်တို.ကို တင်ပို.ခွင့် တင်သွင်းခွင့် ရရှိထားသူတို.အနေဖြင့် ဈေးနှုန်းကွာဟမှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အမြတ်ထုတ်နိုင်သည် ။ ဤသို.သော အခြေအနေမျိုး၌ အာဏာနှင့်ငွေကြေးမှာ ဆက်စပ်နေပြီး လဲလှယ်ဖလှယ်နိုင်ပြီး တချို.သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မညီမျှသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမှ အကျိုးအမြတ် များစွာရရှိနိုင်သည် ။ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်များစွာအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လာဘ်ငွေတံစိုးလက်ဆောင်ပေးရာတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သည် ။
ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ အစိုးရ လုပ်ငန်းများကို ခွဲခြားပစ်ရန် ၊ လက်ရှိအချိန်တွင် အစိုးရမှ ရယူထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်နေသူများသို. လွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိုင်ထားခြင်း သို.မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၌ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ အလွန်အကျွံ ရယူထားခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နက်ရှိုင်းစွာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည် ။ ဤသို.ပြုလုပ်ခြင်းသည် အာဏာနှင့်ငွေကြေး လဲလှယ်ဖလှယ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို ကန်.သတ်ရာရောက်ပေသည် ။ ဤသို.သော ပြဿနာမျိုးကို နောက်ထပ်ပို၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်သည် ။
အဖွဲ.အစည်းများ တည်ထောင်ခြင်းမှာ နောက်ထပ်အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ။ “လူသုံးကုန့်ပစ္စည်း စီးပွါးရေးစနစ်”တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေစေရန်နှင့် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် အခွန်ရုံး ၊ ရဲဋ္ဌွါန ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် တခြားအေဂျင်စီအမျိုးမျိုး အစရှိသည့် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သည့် အဖွဲ.အစည်းများ ရှိရန်လိုသည် ။ အကယ်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ မြင်သာထင်သာရှိ၍ အကျိုးရလာဒ်များကို လူအများသိစေရန် ထုတ်ပြန်ပေးပါက အကျင့်ပျက်မှုများတွင် ပါဝင်ပက်သက်မှုများ လျော့နည်းသွားနိုင်ရာသည် ။
ဟေလုံကျန်းပြည်နယ်အတွင်း၌ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဘဏ်ချေးငွေများကို နှစ်စဉ် လူအများသို. ကြေညာသည့် ဒေသတစ်ခုရှိကြောင်း ကျွန်တော်ကြားဖူးသည် ။ မည်သူကချေးငွေရ၍ အကျိုးအမြတ်မည်မျှ ပြန်လည်ရရှိကြောင်းကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည် ။ ဤသို.ဖြင့် အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တို.ကို ပြန်လည်စိစစ်သည့်လုပ်ငန်း၌ ပြည်သူအများ ပါဝင်လာနိုင်သည် ။ မြင်သာထင်သာမှုနည်းလေ မသမာမှုပြုလုပ်ရန် ပို၍လွယ်ကူလေဖြစ်သည် ။ ဤအချက်ကြောင့်ပင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အဖွဲ.အစည်းများ ဖွဲ.စည်းရခြင်းဖြစ်သည် ။ ဘေဂျင်းမြူနီစီပယ်အတွင်းရှိ ဒေါင်ချန်ခရိုင်သည် ဤအချက်တွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားသည် ။ ဤသို.လုပ်ခြင်းသည် လူထု၏ ထောက်ခံမှုကို လွယ်ကူစွာ ရရှိစေသည် ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည် ။ ထွန်းသစ်စ နိုင်ငံများ၌ ဖွံ.ဖြိုးရေး၏ အစောပိုင်းကာလများတွင် အကျင့်ပျက်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်. ပျံ.နှံ.သည့်ကာလများ ရှိခဲ့သည်။ စီးပွါးရေးက လျှင်မြန်သည့် အမြန်နှုန်းဖြင့် ကြီးထားလာချိန်တွင် နိုင်ငံရေး အာဏာမှာ တစ်နေရာတည်း၌ လွန်မင်းစွာ စုစည်းနေသည် ။ အစိုးရအရာရှိများ၏ အပြုအမူများကို ပြည်သူလူထုက မစီစစ်နိုင်ပေ ။ အကယ်၍ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသည် ၎င်း၏အာဏာကို ပြန်လည်မစစ်ဆေးပါက အရာရှိများသည် လွယ်ကူစွာ အကျင့်ပျက်ခြစားနိုင်ကြသည် ။ နောက်ဆုံး၌ ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို တည်ထောင်ခြင်း ၊ ပို၍အမျိုးအစားစုံလင် ကျယ်ပြန်.သော နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ဖော်ဆောင်ခြင်း ၊ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များတွင် ပြည်သူလူထု ပို၍့ပါဝင်ပက်သက်လာခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အာဏာတို.ကို ပြည်သူလူထု၏ အမြင်ဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် အခြေအနေများ ပို၍ကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေသည် ။ အာဆီယံနိုင်ငံတချို.နှင့် တိုင်ဝမ်တို.သည် ဤနည်းဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည် ။ စီးပွါးရေး အခြေခံများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လာသည် ။
နောက်ထပ်တခြားအရေးကြီးသည့် (အရေးအပါဆုံး မရှိမဖြစ်ဟု ဆိုရမည့်) အချက်တစ်ခုမှာ တရားရေးစနစ်နှင့် လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတို.ဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ လွတ်လပ်သည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိပဲ အာဏာရ နိုင်ငံရေးပါတီက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်းရှိနေပါက အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ဘယ်သောအခါမျှ ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။
ဤအချက်အားလုံးကို ဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှုးများ အစည်းအဝေး၌ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည် ။ သို.သော်လည်း ယနေ.အချိန်ထိတိုင်အောင် ဤပြဿနာကို ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းပုံမရှိပေ ။
ဇွန်လ ၄ ရက်နောက်ပိုင်း လီပင်းနှင့်အပေါင်းအပါများက ကျွန်တော့်အား ဝေဖန်နေကြချိန်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်၌ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်ကြောင်း ပြောကြားသည့်အတွက် အကျင့်ပျက်မှုနှင့်ပက်သက်၍ ကျွန်တော်သည် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေ လွှတ်ပေးထားသည့် သဘောထားရှိသည်ဟု ကျွန်တော့်အား စွပ်စွဲကြသည် ။ အခြေအမြစ်မရှိသည့် စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ကျွန်တော့်အား စွပ်စွဲရန်အတွက် သူတို.အတွက် ဘယ်သောအခါမျှ စကားလုံး ရှားပါးမည့်ပုံမရှိပေ ။
တကယ်တမ်း၌ ကျွန်တော့်စိတ်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို များစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိုသည် ။ အကျင့်ပျက်မှု ဆန်.ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပက်သက်၍ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် ဗဟိုကော်မတီစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် ဇွန်လအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းအဝေး ၂ ရပ်လုံး၌ ကျွန်တော် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည် ။ အောက်ခြေအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ၏ အတွေ.အကြုံများကို ကြားနာသည့် ဆွေးနွေးပွဲများစွာကိုလည်း ကျွန်တော် ကျင်းပခဲ့သည် ။ ပြဿနာကို မှန်ကန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အဖြေတစ်ရပ် ရှာဖွေတွေ.ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆန်.ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးကို စိတ်အားတက်ကြွစွာ ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့သည် ။ ကျွန်တော်သည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်း သက်သေခံထွက်ဆိုရန်အတွက် ကျွန်တော့်စကားလုံးတို.ကို လီပင်းနှင့် အပေါင်းအပါများက ထုတ်နှုတ်ကိုးကားကြခြင်းသည် လုံးဝမတရားပေ ။
ဤပြဿနာမှာ ယနေ.ထိတိုင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည် ။
(ကျောက်ကျိယန်၏ Prisoner of the State စာအုပ်မှ Part 3, Chapter 12 Coping with Corruption ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။)
Posted by T2A at 10:28 PM2comments Links to this post
တရုတ်ပြည် စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ ၊ အခန်း ၁၁ (နိုင်ငံတော် အကျဉ်းသား)
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အစောပိုင်းကာလ အောင်မြင်မှုများက ကျောက်ကို အားတက်လာစေပြီး
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးရေးအတွက် ပို၍ရဲရင့်သော ဗျူဟာများကို ချမှတ်လာစေရန်
စေ့ဆော်တွန်းအားပေးခဲ့သည် ။ ထိုဒေသတွင် ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများသာ
လုံးလုံးအကောင်အထည်ဖော်မည့် အယူအဆဖြစ်သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တစ်လျှောက်တွင်
အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ အမြောက်အများ ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်သည် ။ သို.သော်လည်း
ပို၍ကျယ်ပြန်.သည့် မူဝါဒများက အလျှင်အမြန် ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး တရုတ်ပြည်ကို ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးနှင့်
ချိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်ဟု ကျောက်က ယုံကြည်သည် ။ သူ.ကို အချိန်ပေးပါက ဤစိတ်ကူးစိတ်သန်းကို
ပို၍နက်ရှိုင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်မှာ ထင်ရှားလှသည် ။
၁၉၈၇ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီ၌ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို. ကျွန်တော် စစ်ဆေးရေးခရီးထွက်ခဲ့သည် ။ ထို.နောက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း၌ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးရေးအတွက် မဟာဗျူဟာများကို ကျွန်တော် အဆိုပြုခဲ့သည်။
ထိုခရီးစဉ်များအတွင်း၌ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သည် ကျွန်တော်တို. ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် အခြေအနေကောင်းများ တည်ရှိနေသည်ဟု ကျွန်တော် ပို၍ယုံကြည်လာခဲ့သည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုရသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများသည် လုပ်သားပေါများ၍ လုပ်အားခ ဈေးသက်သာသည့်နေရာများသို. အမြဲရွှေ.ပြောင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ တချို.သော ဖွံ.ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် သူတို.၏ ထုတ်ကုန်များကို အသိပညာအရ ၊ နည်းပညာအရ ပို၍မြင့်မားသည့် သို.မဟုတ် အရင်းအနှီးအရ ပို၍ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသည့် ထုတ်ကုန်များသို. ပြောင်းလဲလာနေကြသည် ။ ဤအချက်က ဖွံ.ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေသည် ။ ဤသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည် ။ ဂျပန်သည် ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ခဲ့သည် ။ အာရှ၏ ကျားလေးကောင်ဖြစ်သည့် တိုင်ဝမ် ၊ စင်္ကာပူ ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို.သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်သည် ။ ဤသည်မှာ ကျားလေးကောင် စတင်တာထွက် ပျံသန်းသည့် ပုံစံဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော်တို.၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် ကြီးမားသည့် အားသာချက်များ ရှိနေသည် ။ ၎င်းတို.တွင် တခြားဖွံ.ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထက် များစွာသာလွန်သည့် အရည်အချင်း မြင့်မားသည့် လုပ်သားများရှိနေသည် ။ သယ်ယူပို.ဆောင်ရေး အဆင်ပြေသည် ၊ သတင်းအချက်အလက်များ လွယ်လင့်တကူ ရရှိနိုင်ပြီး လူအများသည် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်၏ အခြေအနေနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို သိရှိနားလည်ကြပြီးလျှင် ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများထက် ပို၍လျှင်မြန်စွာ တုံ.ပြန်နိုင်ကြသည် ။ အခြေခံအဆောက်အအုံက ပို၍ကောင်းမွန်ပြီး အသေးစားနှင့် ချည်ထည်လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ပို၍ကောင်းမွန်သည် ။ ကျွန်တော်တို.၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် အာရှကျားများ လျှောက်လှမ်းခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းနိုင်သည့် အခြေအနေအားလုံး ရှိနေသည် ။
ဤချဉ်းကပ်နည်းက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးမှုကို အရှိန်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည် ။ အဆိုပြုထားသည့် ဗျူဟာက ပို.ကုန်ဦးစားပေးသည့် စီးပွါးရေးစနစ် တည်ထောင်ရန် ဖော်ပြထားသည် ။ အဓိပ္ပါယ်မှာ လူသန်းပေါင်း ၁၀၀ မှ သန်းပေါင်း ၂၀၀ ထိ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို. ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်လာမည်ဖြစ်သည် ။ ၎င်းက “နိုင်ငံတကာသို. ဆန်.တန်းဆက်သွယ်ထားသည့် အစွန်းနှစ်ဖက်”ကို အားပေးမြှုင့်တင်ပေးပေလိမ့်မည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြီးသတ်ကုန်ချောများ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို. ဖြည့်သွင်းပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှ ကုန်ကြမ်းနှင့် တခြားရင်းမြစ်များကို တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ ပြည်ပသို.တင်ပို.သည့် ပို.ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ပြည်တွင်းရင်းမြစ်များအပေါ်တွင်သာ လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေမည်ဆိုပါက ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြတ်လပ်မှုဆီသို. ဦးတည်သွားပေလိမ့်မည် ။ နိုင်ငံ၏ အရှေ.ပိုင်း ၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဒေသများအကြား ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုက နိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေပေလိမ့််မည် ။
ဤမဟာဗျူဟာကို အဆိုပြုတင်ပြသောအခါ၌ ရဲဘော်ရှောင်ပင်းက ထောက်ခံပြီး များစွာချီးကျူးခဲ့သည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် မည်သည့်အခွင့်အရေးမျှ လက်လွတ်မသွားစေရန်အတွက် ရဲရင့်၍ ပြတ်သားသော အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်သင့်ကြောင်း သူကပြောသည် ။ ကမ်းရုိုးတန်းဒေသ တချို.ကလည်း ထောက်ခံကြပြီး အားတက်သရော ရှိကြသည် ။ သူတို.၏ အနာဂတ်များ မည်မျှတောက်ပမည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို. သိမြင်ကြသည် ။
သို.သော် ဆန်.ကျင်ဖက်အမြင်များလည်း တည်ရှိနေသေးသည် ။ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်း ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ယော်ယိလင်နှင့် လီပန်းတို.တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေကြသည် ။ အပူချိန်လွန်ကဲနေသည့် နိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို ဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စနှင့် “ညင်သာသည့် ဆင်းသက်နည်း”ဖြင့် ချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းရမည့် အရေးတို.ကလည်း ရှိနေသေးသည် ။ အကယ်၍ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်မည်ဆိုပါက စီးပွါးရေးသည် တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ အပူချိန်လွန်ကဲမှု ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါလော ။ တကယ်တမ်း၌ ဤအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပေ ။ အများပြောနေကြသည့် “အပူချိန်လွန်ကဲမှု”ပြဿနာမှာ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးလွန်းခြင်း ၊ မြန်လွန်းခြင်းစသည့် အကြောင်းတို.ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု ရိုးစင်းစွာပြော၍မရနိုင်ပေ ။ ဖွံ.ဖြိုးမှုအရှိန်နှုန်းမှာ အခြေအနေက လက်ခံစုပ်ယူနိုင်သည့်နှုန်းထက် ကျော်လွန်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ပြဿနာ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလွန်ကဲခြင်း ၊ မြှုပ်နှံထားသည့် အရင်းအနှီးများအတွက် အကျိုးအမြတ် ပြန်ရမှုနှေးကွေးခြင်း သို.မဟုတ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ရမှု နည်းပါးခြင်းတို.ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ထို.ပြင် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှု များပြားခြင်းကြောင့် လည်ပတ်နေသည့် ငွေကြေးများ အလျှံပယ် ပိုလွန်များပြားနေခြင်းကလည်း အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။
အကယ်၍ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် ဤဗျူဟာဖြင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားပါက ဤပြဿနာများ ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ။ ပထမအချက်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးမားများပြားစွာ မလိုအပ်ခြင်း ၊ ဒုတိယအချက် ထုတ်ကုန်များကို လျှင်မြန်စွာ ရောင်းချနိုင်ခြင်းနှင့် တတိယအချက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှ တင်သွင်းနိုင်ခြင်းတို.ကြောင့်ဖြစ်သည် ။
အာရှကျားလေးကောင်၏ စီးပွါးရေးများက ဤအချက်ကို သက်သေပြပြီးဖြစ်သည် ။ သူတို.၏ ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးစနစ်များကို စတင်ဖော်ဆောင်ချိန်မှာ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် ကြည့်ပါက ငွေကြေးဖောင်းပွနေသည့် အချိန်ကာလဖြစ်ပြီး လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုထုတ်လုပ်ရသည့် ထုတ်ကုန်များကို တင်ပို.၍ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခဲ့ကြသည် ။ ရလာဒ်မှာ သူတို.၏ စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ပြီး နှစ်များစွာတောက်လျှောက် ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည် ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပင် သူတို.၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းများ လျော့ကျလာပြီး စီးပွါးရေးမှာ ပို၍တည်ငြိမ်စွာ ကြီးထွားလာခဲ့သည် ။
တရုတ်ပြည်သည် မတူကွဲပြားခြားနားသည့် ဒေသများစွာပါဝင်သည့် ကြီးမားသည့် တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် မကြာခဏဆိုသလိုပင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် သင့်တော်သည့် ချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းပုံ တစ်မျိုးတည်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည် ၊ သို.သော် ထိုအချက်က ဒေသတစ်ခုချင်းစီ၏ အားသာချက်နှင့် ထူးခြားသည့် သဘာဝများကို လျစ်လျူရှုထားသလိုရှိသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် စီးပွါးရေး အပူချိန်လွန်ကဲမှုမရှိစေပဲ ပို၍လျှင်မြန်စွာ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်တို.သည် တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများကို လျှော့ချဖို. ကြိုးစားနေသည့်အတွက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးမှုကိုလည်း ကန်.သတ်ခဲ့သောကြောင့် အခွင့်အလမ်းများစွာ လက်လွှတ်ခဲ့ရသည် ။ ထိုနည်းအတိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော်တို. ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည် ။ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ရန်ရှိပါက တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ကျွန်တော်တို. လုပ်ဆောင်ကြသည် ။ အခြေအနေများကို အရှိန်လျှော့ချရန်ရှိပါက ဒေသအားလုံး၌ ကျွန်တော်တို. လျှော့ချကြသည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် အခွင့်အလမ်းများစွာကို အကြိမ်များစွာ လက်လွှတ်ခဲ့ရသည် ။
ပါတီဝါရင့်တချို.တွင်လည်း တခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် “နိုင်ငံတကာသို. ဆန်.တန်းဆက်သွယ်ထားသည့် အစွန်းနှစ်ဖက်”သည် ကောင်းမွန်သည့် သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ထိုအချက်ကို သက်သေပြနိုင်ရန်မလွယ်ကူဟု ချန်ယန်းက စိုးရိမ်သည် ။ သူ၏ ပူပန်မှုကို ကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါသည် ။ အကယ်၍ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို.၏ ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို. မတင်ပို.နိုင်ပါက ကျွန်တော်တို.၏ နိုင်ငံခြားငွေများကို မည်ကဲ့သို. တည်ငြိမ်မျှတအောင် ထိန်းသိမ်းမည်နည်း ။ သို.သော် သူ၏ ပူပန်မှုကို နားလည်နိုင်စရာရှိသော်လည်း တကယ့်မေးခွန်းမှာ ကျွန်တော်တို.တွင် ဤကဲ့သို.သော အခြေအနေပေးမှု အားသာမှုများ ရှိနေပြီး ၊ အာရှကျားလေးကောင်သည်လည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သကဲ့သို. ကျွန်တော်တို.လည်း အဘယ့်ကြောင့် ဤသို.မလုပ်နိုင်ရပါမည်နည်း ။ ကျွန်တော်တို.လည်း မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရပါမည်နည်း ။
အတားအဆီး ၂ ခုရှိသည် ။ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုစနစ်နှင့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတို.ဖြစ်သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးရေး ဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သူများအနေဖြင့် သူတို.၏ အမြတ်နှင့် အရှုံးများအတွက် သူတို.ကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံဖို.ဖြစ်သည် ။ ထိုစဉ်အချိန်က “ပမာဏ ကြီးမားများပြားသည့် သွင်းကုန်နှင့် ထုတ်ကုန်တို.ကို နှောင့်နှေးမှု မရှိစေပဲ ခွင့်ပြုရန်” ကျွန်တော် အဆိုပြုတင်ပြနေချိန်ဖြစ်သည် ။ များပြားသည့် သွင်းကုန်နှင့် ထုတ်ကုန်တို.ကို အနှောင့်အနှေးမရှိ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုစနစ်၌ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည် ။
နောက်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းများကို မည်သို.ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်မည်နည်းဆိုသည့် ကိစ္စဖြစ်သည် ။ “ထမင်းတစ်ပန်ကန်းထဲမှစားသည့်” အလေ့အထ သို.မဟုတ် “အမြတ်ကိုယူပြီး အရှုံးကိုမူ မျှဝေကျခံစေသည့်” အလေ့အထကို ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပေ ။ ပထမဦးစွာ ကန်းရိုးတန်းဒေသများ၌ မြို.နယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ရန် ကျွန်တော်အလေးထားသည် ။ ဤလုပ်ငန်းများသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြီး လုပ်ရကိုင်ရ ဆက်ဆံရ လွယ်ကူအဆင်ပြေသည် ။ မြို.နယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများစွာကို ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရာ သူတို.သည် အချိန်မှီ ဖြန်.ဖြူးပို.ဆောင်နိုင်၍ အရည်အသွေးကို ဂရုစိုက်အလေးထားသောကြောင့် အသိအမှတ်ပြုမှု များစွာရရှိသည် ။
တတိယအချက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွင် ပါဝင်ပက်သက်နေကြသည့် ပညာရှင်များ၏ စိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည် ။ အာရှကျားများသည် အလွန်သေးငယ်ကြပြီး ကျွန်တော်တို.ကမူ အလွန်ကြီးမား၍ လူဦးရေ အလွန်များပြားသည့် အချက်ကို သူတို.က ထောက်ပြကြသည် ။ ကျွန်တော်တို. ထုတ်လုပ်သမျှ ထုတ်ကုန်အကုန်လုံးကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို. တင်ပို.ရောင်းချနိုင်ပါမည်လောဟု သူတို.က တွေးတောစိုးရိမ်ကြသည် ။
ဤကိစ္စကို ဤသို.စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည် ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာနေသရွေ. ဈေးကွက်၌ သူတို.၏နေရာကို သူတို.ရှာဖွေတွေ.ရှိနိုင်ပေလိမ့်မည် ။ ဈေးကွက်သည် သင့်အတွက် ဈေးကွက်ဝေစု ရရှိသွားပြီးသည်နှင့် နောက်ထပ် ထပ်မံ၍ နေရာမရရှိနိုင်တော့အောင် အရွယ်ပမာဏအရ ရပ်တန်.၍ ငြိမ်သက်သွားသည့် သဘောမျိုးမရှိပါ ။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် လစ်ဟာနေသည့်နေရာနှင့် ပြတ်လပ်နေသည့် ကုန်စည်ဟူ၍ မရှိသည်မှာ သေချာပါသည် ။ အဓိကအချက်မှာ သင်မည်မျှ နေရာရ၍ ၊ ကျွန်တော်မည်မျှ နေရာရသနည်းဟူသည့် ဈေးကွက်ဝေစု ရရှိရေးသာဖြစ်သည် ။ စုစုပေါင်း ပမာဏမှာမူ စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ကြီးမားတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည် ။ သို.သော် ဈေးကွက်ဝေစုမှာမူ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ကိန်းရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းပေါ်၌ မူတည်နေသည် ။ ထို.ကြောင့်ပင် ဖွံ.ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုထုတ်လုပ်ရသည့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတို.ကို ရပ်တန်.ပြီး သူတို.၏ လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်၍ ထိန်းညှိပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ထွန်းသစ်စ စီးပွါးရေးနိုင်ငံများ အရှိန်ရ ပျံသန်းနိုင်လာသည်နှင့်အမျှ သူတို.၏ လုပ်အားခမှာလည်း မြင့်တက်လာပြီးလျှင် သူတို.၏ အားသာချက်များမှာလည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆုံးရှုံးလာသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် ဂျပန်သည် ၎င်း၏လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုရသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို အာရှကျားလေးကောင်သို. ပြောင်းရွှေ.ခဲ့သည် ။ သို.သော် ယခုအချိန်တွင်မူ အာရှကျားများသည် သူတို.၏ ဤအားသာချက်များကို လက်လွတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည် ။
တရုတ်ပြည်ကဲ့သို.သော တိုင်းပြည်တစ်ခု၌ လုပ်အားရင်းမြစ် များစွာရှိသည့် အားသာချက်ရှိသည် ။ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေရန်မလိုပေ ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကို လှမ်းပြီးသည်နှင့် ဒုတိယနှင့် တတိယ ခြေလှမ်းတို.ကို လှမ်းနိုင်သည် ။ လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုထုတ်ကုန်တို.ကို ကျွန်တော်တို. တင်ပို.သည်နေသည်နှင့်အမျှ အရင်းအနှီးနှင့် ခေတ်မှီနည်းပညာတို.ကို ကျွန်တော်တို. စုဆောင်းသင်ယူနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်၍ အရင်းအနှီးအရသော်လည်းကောင်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ထုတ်ကုန်တို.အရသော်လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပေမည် ။
သို.သော် ထိုအချက်မှာ အနာဂတ်ဖွံ.ဖြိုးမှုအတွက် မေးခွန်းများဖြစ်ပြီး ကြောက်ရွံ.စိုးရိမ်နေရန်မလိုပေ ။ ဤသည်မှာ အစကနဦးမျှသာရှိသေးသည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် လူသန်းပေါင်း ၂၀၀ မျှကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နှင့် ချက်ချင်းတိုက်ရိုက်ထိတွေ.စေရန် တွန်းပို.ခြင်းမဟုတ်ပေ ။ ဤသည်မှာ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်သည် ။
ကမ္ဘာ.အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အယောင်ဆောင်ဟန်ဆောင်မှုကို စွန်.လွှတ်ရန် တွန်.ဆုတ်နေသူများလည်း ရှိသေးသည် ။ ဆိုရှယ်လစ် တရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံသည် လုပ်အားအဓိက အသုံးပြုထုတ်ကုန်တို.ကို ဦးစားပေးထုတ်လုပ်၍ ကျေးလက်မြို.နယ် လုပ်ငန်းတို.မှ ထုတ်လုပ်သည့် ပြည်ပပို.ကုန်တို.ကို မည်သို.အားကိုးအားထား ပြုရမည်နည်းဟု သူတို.က မေးခွန်းထုတ်ကြသည် ။ ကြီးမားသည့် လုပ်ငန်းစုကြီးတို.ကို စုဖွဲ.တည်ထောင်၍ ကုန်စည်တို.ကို ထုတ်လုပ်ပြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ပြည်ပပို.ကုန်တို.ကို တင်ပို.ခြင်းသည်သာ မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟု သူတို.က ယုံကြည်ကြသည် ။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံအတွက် လုံးဝလက်တွေ.မကျပေ ။ ကျွန်တော်တို.သည် ထိုစဉ်က မည်သည်တို.ကို တင်ပို.နေပါသနည်း ။ အဓိကပို.ကုန်တို.မှာ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး စက်မှုကုန်စည်များမဟုတ်ပေ ။ အများစုမှာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသာဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် ဖွံ.ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို.အနေဖြင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ကုန်စည်တို.ကို မည်မျှပင် ထုတ်လုပ်ချင်စေကာမူ ဤသို.သောကုန်စည်တို.ကို အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်ရန် မည်သို.မျှမဖြစ်နိုင်ပဲ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ ကျွန်တော်တို.အနေဖြင့် လုပ်အားအဓိကသုံးစွဲ ထုတ်လုပ်ရသည့် ကုန်စည်တို.ကို အမြောက်အများ တင်ပို.သည့်စနစ်က စတင်ဖို.လိုအပ်သည် ။ စီးပွါးရေးတည်ငြိမ်ပြီး ပိုမိုအင်အားတောင့်တင်းအောင် တည်ဆောက်၍ ပြီးစီးလျှင် ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ထုတ်ကုန်များနှင့် ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်တင်ပို.ရေး ရည်မှန်းချက်ကို ပြန်လည်ဦးတည်နိုင်သည် ။
နောက်ထပ်တခြား ဆန်.ကျင်မှုမျိုးလည်း ရှိသေးသည် ။ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများထက် ရှေ.ကပြေးနေပြီး ပို၍ဖွံ.ဖြိုးနေသည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးရေးကို အဘယ့်ကြောင့် နောက်ထပ်ပို၍ ဖော်ဆောင်ဖို. လိုအပ်ပါသနည်းဟု အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဒေသများမှ ကေဒါများ သို.မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့် ကျယ်ပြန်.သည့်အကြီးစား စီးပွါးရေးစီမံခန်.ခွဲမှုများတွင် ပါဝင်ပက်သက်နေသူများက မေးခွန်းထုတ်ကြသည် ။ အဟကွာမှု ပို၍ကြီးမားမလာနိုင်ပေလော ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးရေးကို ပို၍ဖော်ဆောင်လျှင် ချမ်းသာသူကို ပို၍ချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ပေးရာရောက်သည်ဟု ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများမှ ကေဒါများက ယုံကြည်ကြသည် ။ ဆင်းရဲသူကို ချမ်းသာလာအောင် အဘယ့်ကြောင့်မလုပ်သနည်းဟု သူတို.က သိချင်ကြသည် ။
တကယ်တမ်း၌ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ဖွံ.ဖြိးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်သည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကိုသာ အကျိုးရှိစေရုံမျှသာမက အတွင်းပိုင်းဒေသများအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စီးပွါးရေးကိုလည်း မောင်းနှင်နိုင်သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိပဲ ရွှေ.ပြောင်းသွားလာနေသည့် အလုပ်သမားတို. မည်သည့်နေရာ၌ အလုပ်သွားရှာရပါမည်နည်း ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ လုပ်အားအဓိက အသုံးပြု ထုတ်လုပ်သည့်ဖြစ်စဉ်သည် နိုင်ငံအတွင်း၌လည်း ဖြစ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်အားခသက်သာသည့် ဒေသများသို. ရွေ.လျှားသွားပေလိမ့်မည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ လုပ်အားခမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ သူတို.၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ပြန်လည်ထိန်းညှိရန် တွန်းပို.ပေလိမ့်မည် ။ ထို.ကြောင့် ကျွန်တော်တို.သည် ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တစ်ပြေးညီ မပြုလုပ်နိုင်ပဲ ဒေသတစ်ခုက တခြားဒေသတစ်ခုကို မောင်းနှင်သည့်နည်းဖြင့်သာ ဖော်ဆောင်နိုင်သည် ။ တစ်ပြေးညီ ရွေ.လျှားမှုဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ မည်သည့်ဒေသမျှ လျှင်လျှင်မြန်မြန် မရွေ.နိုင်ဆိုသည့်သဘောဖြစ်သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် တရုတ်ပြည်၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည် ။ ၎င်းတို.၏ အားသာချက်တို.ကို အသုံးချနိုင်ပါက အတွင်းပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဒေသများအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးရှိပေလိမ့်မည် ။ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ဖွံ.ဖြိုးရေးဟူသည့် ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ဖွံ.ဖြိုးရေးကို ဦးစားပေးဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပေသည် ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှု များစွာရှိနေသော်ငြားလည်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗျူဟာကို ပေါ်လစ်ဗျူရိုမှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီး ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် ။ ဇွန်လ ၄ ရက် နောက်ပိုင်း၌ ဤမဟာဗျူဟာကို နံမည်တပ်၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲမှု မရှိတော့သော်လည်း လက်တွေ.တွင်မူ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ စီးပွါးရေး ရေရှည်ဖွံ.ဖြိုးမှုကြောင့်သာလျှင် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ နိုင်ငံ၏ ပို.ကုန်ပမာဏ များစွာကြီးမားများပြားလာပြီးလျှင် နိုင်ငံခြားအရံငွေကြေးမှာလည်း ပမာဏကြီးမားစွာ များပြားတိုးတက်လာခဲ့သည် ။ ၎င်းမှာ ဤလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သောကြောင့် မဟုတ်ပေလော ။ သိကြသည့်အတိုင်းပင် ဇွန်လ ၄ ရက်နောက်ပိုင်း၌ ဤမဟာဗျူဟာအကြောင်းကို မူဝါဒတစ်ခုအနေနှင့် မည်သူမျှ မပြောနိုင်ကြတော့ပေ ။ ဤသို.ပြောကြားပါက ဤမဟာဗျူဟာကို အားတက်သရော ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နေမှုကို နှောင့်နှေးသွားစေပေလိမ့်မည် ။
တစ်ခါက တိုင်ဝမ်မှ လုပ်ငန်းရှင် အမြဲစိမ်းလုပ်ငန်းစု၏ ဥက္ကဋ္ဌ ချန်ယန်ဖနှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည် ။ သူသည် တစ်ခါက ဖော်မိုဆာ ပလတ်စတစ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဝမ်ယန်ချင်းကဲ့သို.ပင် တိုင်ဝမ်၌ ကျော်ကြားသူဖြစ်သည် ။ စကားပြောဆိုဆွေးနွေးကြစဉ်၌ ကျွန်တော်က “ခင်ဗျားအနေနှင့် တိုင်ဝမ်မှာ ဒေါ်လာငွေ ဘီလီယံနဲ.ချီပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်တာဟာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဖူးဗျ ။ ဒီလိုမျိုး သေးငယ်လွန်းလှတဲ့ နေရာဒေသမျိုးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များ ခင်ဗျားရှာဖွေနိုင်သလဲ”ဟု သူ.ကိုမေးကြည့်သည် ။
“သိပ်တော့လည်း အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး ။ လက်ရှိခင်ဗျားတို.လုပ်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တံခါးဖွင့် မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုကိုသာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားပါ ။ နိုင်ငံခြားအရံငွေတွေ အများကြီးရလာဖို. သိပ်ပြီးမကြာလှပါဘူး ။ တိုင်ဝမ်တောင်လုပ်နိုင်သေးရင် ပြည်မကြီးကလည်း လုပ်နိုင်တာပေါ့”ဟု သူကပြန်ပြောသည် ။ ဤအချက်ကို သူက လွန်စွာအကောင်းမြင်၍ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ပြောခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုစဉ်ကမူ ကျွန်တော့်၌ သံသယစိတ်တို. ရှိနေခဲ့သည် ။ ဤအချက်သည် ဤမျှလောက်ထိ လွယ်ကူပါမည်လော ။ ယခုအခါ၌မူ ၎င်းမှာ ပြောပလောက်အောင် အခက်ကြီးမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားလာပေပြီ ။ အဓိကအချက်မှာ တံခါးဖွင့်ထားဖို.ပင်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို.အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့် မူဝါဒတို.ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသရွေ. ကျွန်တော်တို.၏ စီးပွါးရေးသည် လျှင်မြန်စွာ ဖွံ.ုဖြိုးလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခင်ကတည်းက အကြိမ်များစွာ ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
၁၉၈၇ခုနှစ် ဆောင်းဦးရာသီမှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ ဖူကျင့် ၊ ဂွမ်ဒေါင်း ၊ ဇီကျမ်းနှင့် ကျန်စုဒေသများသို. စစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်ရှည်ကြီးတစ်ခု ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စီရင်စု ၊ မြူနီစီပါယ် ၊ ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ကေဒါများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။ သင့်လျော်သည့် ဗဟိုအစိုးရ အေဂျင်စီများနှင့်လည်း ကျွန်တော် အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာကို ကျွန်တော် အဆိုပြုတင်ပြခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာ၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွါးရေး၏ အကူးအပြောင်းက ဖန်တီးလာသည့် အခွင့်အလမ်းများကို အပြည့်အဝ ရယူအသုံးချနိုင်ရန်အတွက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ ပို.ကုန်အဓိက ဦးစားပေး စီးပွါးရေးစနစ်ကို ချမှတ်ဖော်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည် ။ စီမံကိန်းသည် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၀၀ မှ သန်းပေါင်း ၂၀၀ ထိ နေထိုင်သည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက် အကြုံးဝင်သည် ။ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည် ။
၁ ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အနှစ်သာရအားဖြင့် ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးစနစ် တည်ဆောက်ဖော်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွါးရေးစနစ်၏ ဖွဲ.စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပြန်လည်ထိန်းညှိမှုမှ ပေါ်ထွက်လာမည့် အခွင့်အလမ်းများကို အရအမိ အသုံးချလျှက် လုပ်အားအဓိကအသုံးပြု သို.မဟုတ် လုပ်အားနှင့်နည်းပညာ အဓိကအသုံးပြရသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတို. ဖွံ.ဖြိုးရေးကို အဓိက အာရုံစိုက်၍ ဖော်ဆောင်သွားမည် ။
၂ ။ “နိုင်ငံတကာသို. ဆန်.တန်းဆက်သွယ်ထားသည့် အစွန်းနှစ်ဖက်”သဘောတရားအရ ပမာဏကြီးမားများပြားသည့် သွင်းကုန်နှင့်ပို.ကုန်တို.ကို တင်သွင်းတင်ပို.နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းကရိယာများနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတို. တင်သွင်းရန်အတွက် အရင်းအနှီး ၊ စက်ပစ္စည်းကရိယာနှင့် ထုတ်ကုန်တို.ကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်မည် ။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်တွင်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်တို.ကို ပြည်ပသို. တင်ပို.မည် ။ ပမာဏကြီးမား များပြားသည့် သွင်းကုန်နှင့်ပို.ကုန်တို.ကို နှောင့်နှေးမှု မရှိစေပဲ ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သည် ။
၃ ။ ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မြို.နယ်လုပ်ငန်းစုတို.၏ အလားအလာစွမ်းရည်တို.ကို အပြည့်အဝအသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို.သည် အဓိက သို.မဟုတ် အင်အားအကြီးဆုံး အင်အားစုများအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရမည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ မြို.နယ်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းစုတို.၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝ အသုံးချလျှက် ၎င်းတို.ကို ယာဉ်ရထားအဖြစ် အသုံးချလျှက် ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေး လမ်းကြောင်းကို ဖောက်လုပ်ဖော်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်သည် ။ အဆုံးသတ်၌ ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ ကျေးလက်လုပ်သား အင်အားစု၏ အများစုအစိတ်အပိုင်းသည် ဤပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးစနစ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်အတွင်း၌ ပါဝင်ပေါင်းစပ်လာပေလိမ့်မည် ။
၄ ။ ဤသို.သော အပြောင်းအလဲနှင့် ကိုက်ညီလိုက်လျောညီထွေ ရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုစနစ်ရှိ သွင်းကုန်နှင့် ပို.ကုန်တို.ကို ဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည် ။ သူတို.၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတို.ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားသည့်အားလျှော်စွာ ပြည်ပသို. တင်ပို.ရန်အတွက် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အဖွဲ.အစည်း သို.မဟုတ် လုပ်ငန်းစုများနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပြည်ပနှင့် တင်သွင်းတင်ပို.လုပ်နေသည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစုတို.သည် ၎င်းတို.၏ အမြတ်နှင့် အရှုံးတို.အတွက် ၎င်းတို.ဘာသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည် ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရပါက ဤအစီအစဉ်သည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ သန်းပေါင်း ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ထိရှိသည့် ပြည်သူများနှင့် ဒေသတွင်းရှိ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစုတို.ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွါးရေးအတွင်းသို. ပေါင်းစပ်ပါဝင်သွားစေပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှိ ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွင်းသို. ပါဝင်သွားစေမည်ဖြစ်သည် ။
တရုတ်ပြည်ပြင်ပ၌ နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေးစနစ်၏ ဖွဲ.စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပြန်လည်ထိန်းညှိမှုမှာ လမ်းကြောင်းပေါ်သို. ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး တချို.သော စက်မှုဖွံ.ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ သို.မဟုတ် အသစ်ပေါ်ထွန်းလာသော ထွန်းသစ်စ စက်မှုနိုင်ငံများ၌ ပြည်သူတို.၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမှာ ပို၍မြင့်မားလာသည် ။ ထို.ကြောင့် ၎င်းတို.၏ လုပ်အားခများမှာလည်း ပို၍မြင့်တက်လာသည် ။ ဤအချက်က လုပ်အားအဓိကအသုံးပြု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်အားခ ဈေးပေါသည့်နေရာများသို. ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွှေ.ပြောင်းသွားစေသည် ။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်း၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ၎င်း၏ လုပ်အားအဓိကအသုံးပြု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် စက်ရုံများကို ဂျပန်နိုင်ငံသို. ပြောင်းရွှေ.ခဲ့သည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ ဂျပန်နိုင်ငံက ၎င်းကိုယ်၎င်း ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်အောင် အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချခဲ့သည် ။ နောက်ပိုင်း၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို.သည် ၎င်းတို.၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တချို.နှင့် စက်ရုံတချို.ကို အာရှကျားလေးကောင်သို. ပြောင်းရွှေ.ခဲ့သည် ။ အာရှကျားများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဂျပန်နှင့် အာရှကျားများသည် ၎င်းတို.၏ စက်ရုံတချို.ကို အာဆီယံ (အရှေ.တောင်အာရှ ဆယ်နိုင်ငံ စုပေါင်းတည်ထောင်ထားသည့် အဖွဲ.) နိုင်ငံများသို. ပြောင်းရွှေ.ခဲ့သည် ။
စီးပွါးရေးစနစ် ဖွဲ.စည်းပုံတည်ဆောက်ပုံ ပြန်လည်ထိန်းညှိမှုမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ အာရှပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ ရပ်တန်.သွားမည်မဟုတ်ပေ ။ ဤလည်ပတ်နေသည့် ဖြစ်စဉ်က ဖွံ.ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ကမ်းလှမ်းနေသည် ။ အတိတ်ကာလက လွတ်လပ်သည့် သတင်းစီးဆင်းမှုမရှိပဲ ကျွန်တော်တို.၏ တံခါးတို.ကို ပိတ်ထားပြီး တင်းကျပ်၍ လွန်ကဲသည့် ဗဟိုဦးစီးကွပ်ကဲမှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သဖြင့် အခွင့်အလမ်းများစွာ ကျွန်တော်တို. လက်လွှတ်ခဲ့ရသည် ။ နောက်ထပ်တခြားအခွင့်အလမ်းများကို ကျွန်တော်တို. လက်လွတ်မခံနိုင်တော့ပေ ။
တစ်ပြိုင်တည်းမှာပင် ကျွန်တော်တို. ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ အခြေအနေကောင်းများ တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည် ။ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် နီးကပ်၍ အဆင်ပြေသည့် သယ်ယူပို.ဆောင်ရေး တည်ရှိမှု ၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများထက် ပို၍ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ရှိမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရနှင့် အတက်ပညာအရပါ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် လုပ်အားစု တည်ရှိနေမှုစသည့် အချက်များနှင့် ပြည့်စုံနေသည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နှင့် ပို၍နီးကပ်ပြီး ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ကုန်သွယ်ကူးသန်းသည့် အစဉ်အလာ ရှိခဲ့သည် ။ အခွင့်အလမ်းနှင့် အခြေအနေကောင်းများ နှစ်ခုလုံးရှိနေပြီးဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို.၏ အတွေးအခေါ်ကို ပိတ်ဆို.နေသည့် အတားအဆီးတို.ကို ဖယ်ရှားပြီး သင့်လျော်သည့် မူဝါဒများကို လမ်းညွှန်အဖြစ် ချမှတ်ကျင့်သုံးပါက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် လျှင်မြန်စွာ ဖွံ.ဖြိုးလာပေလိမ့်မည် ။
အကယ်၍ ဤမဟာဗျူဟာကို မကျင့်သုံးပါက ထိုဒေသများသည် ပို၍ပို၍ ခက်ခဲသည့် အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်တွေ.ကြုံရပေလိမ့်မည် ။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို.၏ လုပ်နည်းကိုင်နည်းအဟောင်းများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေပါက ထိုဒေသများသည် ပို၍အကန်.အသတ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ။ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ သဘာဝရင်းမြစ်များ ကင်းမဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ လွန်ကဲလှသည့် ဗဟိုဦးစီး စီမံကိန်းစီးပွါးရေးစနစ်က တစ်နိုင်ငံလုံးကို စစ်တုရင်ခုံတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ပြီး အနောက်ဖက်ဒေသများ၏ သဘာဝရင်းမြစ်များ ဖွံ.ဖြိုးရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားထားကာ ၎င်းတို.ကို ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို. ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် သယ်ယူပို.ဆောင်စေသည် ။ ဤလမ်းကြောင်းမှာ အလုပ်မဖြစ်တော့ပေ ။
ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများသည် ၎င်းတို.၏ ရင်းမြစ်များကို ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို. ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် မရောင်းချလိုတော့သည့်အတွက် ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ ကွဲလွဲမှုမှာ နက်ရှိုင်းလာသည် ။ ထို.ကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကို အနှစ်သာရအားဖြင့် ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲရေးမှာ အဓိကကျ၍ အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သည် ။
အဆိုပြုချက်တွင် နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါသည့် အချက်များလည်း ပါဝင်သည် ။ လွန်ကဲသည့် ဗဟိုဦးစီး စီမံကိန်း စီးပွါးရေးစနစ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးကို တစ်ပြေးညီဖွံ.ဖြိုးစေရန် ဖော်ဆောင်နေသောကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ အားသာချက်များကို အသုံးမချနိုင်ပေ ။ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများသော်လည်းကောင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသော်လည်ကောင်း အလျှင်အမြန် မဖွံ.ဖြိုးနိုင်ခဲ့ပေ ။ ရှန်ဟိုင်းသည် လွတ်လပ်ရေးမရမှီက အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင် အလွန်ဖွံ.ဖြိုးသည့် မြို.ကြီးဖြစ်သည် ။ စင်္ကာပူနှင့် တိုင်ဝမ်ကိုထားဦးတော့ ဟောင်ကောင်ထက်ပင် ပို၍ခေတ်မှီသေးသည် ။ သို.သော်လည်း ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်မျှ ကြာအပြီး၌ ရှန်ဟိုင်းသည် ထိုးကျသွားပြီး ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူနှင့် တိုင်ဝမ်တို.နောက်တွင် များစွာပြတ်ကျန်နေခဲ့သည် ။ ဤအချက်က “ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ. တကယ့်အားသာချက်က ဘာတွေလဲ”ဟု ပြည်သူများ၏စိတ်တွင် မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ။
အကယ်၍ လူဦးရေ သန်းရာချီရှိသည့် တရုတ်ပြည်၏ ဒေသတစ်ခုကို သူတို.အစွမ်းရှိသလောက် အလျှင်အမြန် ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါက အခြေအနေများ ပို၍ကောင်းမွန်လာပြီး ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေးကို တားဆီးနေသည့် အဟန်.အတားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူ၍ ပြောဆိုကြတော့မည် မဟုတ်ပေ ။ နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက ၎င်းသည် ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို.ကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ပြည်မကြီးနှင့် တိုင်ဝမ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတို.အတွက် ပြည်သူတို.၏ သံသယနှင့် စိုးရိမ်မှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။၁ ၎င်းက ပြည်မကြီးနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပြည်သူများကို ပို၍စိတ်အားတက်ကြွလာစေနိုင်သည် ။
ကျွန်တော်သည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာကို လေ့လာမှု ၊ စမ်းသပ်မှုနှင့် သုံးသပ်မှုများစွာ ပြုလုပ်ပြီးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ပို၍နက်ရှိုင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်ကိုလည်း ပြန်လည်တုံ.ပြန်ခြင်းဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော်သည် ဂွမ်ဒေါင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် ၊ ထိုဒေသသည် ဟောင်ကောင် ၊ မကာအိုတို.နှင့် ကပ်နေသည် ။ ထို.ကြောင့် ကျွန်တော်သည် အတော်စောစောကပင် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်နှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်နေခဲ့သည် ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအား သူတို.၏ အစွမ်းရှိသလောက် အပြည့်အဝ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုကို အသုံးချစေရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပါက များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟု အစောကြီးကတည်းကပင် ကျွန်တော်ယုံကြည်နေခဲ့သည် ။
ဥပမာအားဖြင့် ဂွမ်ဒေါင်းတွင် ကြံစိုက်ပျိုးခွင့် ပြုလိုက်ပါက တစ်ဧကတွင် သကြား ကတ်တီ ၁၀၀၀ မျှထွက်နိုင်သည် ။ အကယ်၍ ဤဒေသတွင် စပါးစိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧကတွင် ဆန်ကတ်တီ ၁၀၀၀ မျှထွက်နိုင်သည် ။ သကြား ကတ်တီ ၁၀၀၀သည် ဆန်ကတ်တီ ၁၀၀၀ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပို၍ဈေးရသည် ။ သကြားကတ်တီ ၁၀၀၀ကို တင်ပို.ရောင်းချရာမှ ရရှိသည့်ငွေဖြင့် ဆန်ကတ်တီ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်သည် ။ သို.သော် အတိတ်ကာလတုန်းက ကျွန်တော်တို.သည် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု၏ အားသာချက်များကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေ ။ အစားအစာ ပြတ်လပ်ရှားပါးမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကြံစိုက်ပျိုးမှုကို ကျွန်တော်တို. မတိုးချဲ.နိုင်ခဲ့ပေ ။ ထို.ကြောင့် ကြံနှင့်စပါး စိုက်ပျိုးခွင့်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုပြဿနာမှာ အမြဲပင် တွေ.ကြုံနေခဲ့သည် ။
ဂွမ်ဒေါင်းတွင် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်၌ ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်နှင့် ရောင်းချနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်သည့် ဆန်မျိုးစိတ်များလည်း အများအပြားရှိသည် ။ ဤအမျိုးအစား ဆန် ၁ ကတ်တီဖြင့် သာမာန်ဆန် ကတ်တီပေါင်းများစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် ။ ဂွမ်ဒေါင်းတွင် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်က အရည်အသွေးမြင့်ဆန် ၁ ကတ်တီကို တင်ပို.ရောင်းချပြီး သာမန်အမျိုးအစား ဆန်၁ကတ်တီနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ကတ်တီပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ဝယ်ယူသည့်နည်းကို ကျွန်တော်ကျင့်သုံးခဲ့သည် ။ ထိုဓာတ်မြေဩတို.ဖြင့် ဆန်ကတ်တီပေါင်းများစွာကို ဒေသတွင်း၌ပင် ပြန်လည်ဖလှယ်ယူခဲ့သည် ။ ဤသို.လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို.တွင် ဆန် ၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် နိုင်ငံခြားငွေတို. ရရှိလာသည် ။ သို.သော် အတိတ်ကာလက ကျွန်တော်တို.သည် ကိုယ့်အားကိုကိုးရေးကို ဦးစားပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေ ။ ထို.ကြောင့် ကျွန်တော်တို.သည် ကျွန်တော်တို.၏ ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များကို လျှော့တွက်ခဲ့သလိုရှိသည် ။
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွင် အလားအလာများစွာရှိသည် ။ ဂွမ်ဒေါင်းတွင် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေစဉ်က ဤအကြောင်းကို ကျွန်တော်များစွာ စဉ်းစားမိခဲ့သည် ။ အကယ်၍ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု သို.မဟုတ် ဒေသတစ်ခုသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန်များ တင်ပို.ခြင်းတို.ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပါက အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိုပေလိမ့်မည် ။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသတချို.အနေဖြင့် တင်ပို.ရောင်းချရန် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိရခြင်း၏ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို.၌ အရည်အသွေးကောင်းသည့် ကုန်ကြမ်းရင်းမြစ်များ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း သို.မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး မပြည့်မှီခြင်း စသည်တို. ဖြစ်ပေါ်လာသည် ။ အကယ်၍ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တင်သွင်းနိုင်၍ ၎င်းကုန်ကြမ်းတို.ကို ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွန်တော်တို.၏ စက်ကရိယာများကို အသုံးချကာ ထွက်လာသည့် အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်ကို တင်ပို.ရောင်းချပါက ကျွန်တော်တို.အတွက် လိုအပ်သည့် အရာမှန်သမျှကို ပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ရုံမျှသာမက နိုင်ငံခြားငွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို. ရရှိနိုင်ပေလိမ့်မည် ။
၁၉၆၀ ခုနှစ်များအတွင်းက ကျွန်တော်တို.၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကို တိုးမြှင့်ပြီး သွင်းကုန်များကို အသုံးပြု၍ ပို.ကုန်ပြန်လည်ရောင်းချမှုကို ပြုလုပ်ရန် ဗဟိုကော်မတီသို. ကျွန်တော်စာရေး၍ အဆိုပြုခဲ့ဖူးသည် ။ ဤနည်းလမ်းကို ဂွမ်ဒေါင်းတွင် အသုံးချရန် ကျွန်တော်တို. ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည် ။ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ယီဂျီဟွမ်း၏ သဘောတူမှုဖြင့် တင်သွင်းမှုနှင့် တင်ပို.မှုတချို. ကျွန်တော်တို. ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ရရှိလာသည့် နိုင်ငံခြားငွေကို ဒေသအစိုးရ အဆင့်၌ မျှဝေသုံးစွဲခဲ့သည် ။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များအတွင်း ဂွမ်ဒေါင်းဒေသ၏ စီးပွါးရေး ပြန်လည်နလံထူလာခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ဤသို.ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရလာဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွက် အလားအလာ များစွာရှိနေသည်ဟု ကျွန်တော် ထိုစဉ်က ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်နေခဲ့သည် ။ ကျွန်တော်တို.၏ စနစ်နှင့် မူဝါဒများက ၎င်းကို လည်ပင်းညှစ်နေသည် ။ အခွင့်အလမ်းများ မရှိသောကြောင့် သို.မဟုတ် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မဟုတ်ပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုသောကြောင့်သာဖြစ်သည် ။
၁၉၈၁ ခုနှစ်အတွင်း တီယန်ကျင်းရှိ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများသို. စစ်ဆေးရေးခရီး သွားခဲ့စဉ်ကလည်း ဤအကြောင်းအရာကို တွေ.ရှိရပြန်သည် ။ တီယန်ကျင်းရှိ ချည်မျှင်စက်ရုံများမှာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ပြတ်လပ်နေပြီး ၎င်းတို.၏ စက်ကရိယာများကို အဆင့်မြှင့်တင်မှု မပြုလုပ်နိုင်ဖြစ်နေသဖြင့် ထုတ်လုပ်ရေး မပြုလုပ်နိုင်ဖြစ်နေသည် ။ ၎င်းမှာ ပြန်လည်ထိန်းညှိရေး ကာလအတွင်းကဖြစ်ပြီး စက်ရုံအများစုမှာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုများ ဆိုင်းငံ့ထားရန် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခံထားရချိန်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်သည် သူတို.နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကယ်၍ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ထင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့ပါက သူတို.၏ ထုတ်ကုန်များကို ပြန်လည်တင်ပို.နိုင်စွမ်းရှိမရှိ မေးမြန်းခဲ့သည် ။ သူတို.က လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း ပြန်ဖြေခဲ့သည် ။ အကယ်၍ ကမ်းရိုးတန်းဒေသအားလုံးကို ပို.ကုန်ဦးစားပေး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ပါက မည်သို.ဖြစ်မည်နည်းဟု ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့သည် ။ နောက်ပိုင်း၌ တခြားအကြောင်းကိစ္စများ ပေါ်လာသဖြင့် ဤအကြောင်းအရာမှာ ဘေးရောက်သွားခဲ့သည် ။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈၁ မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ်အတွင်း၌ “သွင်းအားစု ၃ခု အပေါင်း ပို.ကုန်ထောက်ပံ့ကြေး” အစီအစဉ်ကို ဂွမ်ဒေါင်းတွင် စတင်ခဲ့သည် ။ သူတို.က ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၊ နမူနာပုံစံနှင့် ဒီဇိုင်းတို.ကို တင်သွင်းပြီး ကုန်ချောထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်ရှိတည်ရှိနေဆဲ စက်ကရိယာနှင့် လုပ်အားတို.ကို အသုံးပြုကာ ထွက်ရှိလာသည့် အပြီးသတ်ကုန်ချောကို ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် နိုင်ငံခြားသို. ပြန်လည်တင်ပို.သည် ။ ၎င်းမှာ ထိုစဉ်က အခြေခံကျလွန်းပြီး အကြမ်းသဘောဆန်လှသော်လည်း စံချိန်စံညွှန်းများမှာ လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည် ။ ဂွမ်ဒေါင်းဒေသ အထူးသဖြင့် ဒေါင်ဂွမ်း ၊ နန်ဟိုင်းနှင့် ပုလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတို.မှာ လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည် ။
အစပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များ သွားလေရာနေရာတိုင်း၌ “သွင်းအားစု ၃ခု အပေါင်း ပို.ကုန်ထောက်ပံ့ကြေး” မူဝါဒကို ချမှတ်ခဲ့သည် ။ ထို.ကြောင့် နောက်ဆုံး၌ သူတို.၏ ကုန်ထုတ်စက်ကရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး အခြေစိုက်ဋ္ဌါနများကို ပြည်မကြီးသို. သူတို.ရွှေ.ပြောင်းလာကြသည် ။ ဤအစီအစဉ်ကို ဂွမ်ဒေါင်း၌ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်တွင် ဖူကျင့် ၊ ရှန်ဒေါင်း ၊ ဇီဂျင်းနှင့် ဂျန်စုဒေသတို.ကလည်း နောက်ကလိုက်လာကြသည်။ ရလာဒ်များမှာ ကောင်းမွန်လှသည် ။ ဤအချက်အားလုံးက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ အားသာချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်သာ လိုတော့ကြောင်း သက်သေပြနေသည် ။
ဤကိစ္စများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင်းက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ ဖြစ်ထွန်းနေပြီဖြစ်ပါသည် ။ သို.သော် အားလုံးကို ခြံငုံနိုင်သည့် မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပြောရပါက မဟာဗျူဟာကျကျ တွေးခေါ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်နေသေးသည် ။ ဤအချက်ကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာကို အဆိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ အကြောင်းမရှိပဲနှင့် သို.မဟုတ် တဒင်္ဂလှုံ.ဆော်မှုဖြင့် အဆိုပြုခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် စူးစမ်းလေ့လာမှု ၊ သုတေသနပြုမှုနှင့် နားလည်သဘောပေါက်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁ ။ ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်သည် ဟောင်ကောင်ကို တရုတ်ပြည်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို. တရားဝင်ပြန်လည် လွဲပြောင်းပေးခဲ့သည် ။ နောက် ၂ နှစ်အကြာ၌ ပေါ်တူဂီသည်လည်း မကာအိုကို ဤကဲ့သို.ပင် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် ။
(ကျောက်ကျိယန်၏ Prisoner of the State စာအုပ်မှ Part 3, Chapter 11 The Coastal Regions Take Off ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ )
Posted by T2A at 8:30 PM 1 comments Links to this post